Iyo yechishanu beta yeWOSOS 3.1.1 inowanikwawo | Ndinobva mac
Iyo yechishanu beta yeWOSOS 3.1.1 inowanikwawo
Beta vhezheni masikati eMuvhuro wekutanga waZvita uno. Parizvino, iyi itsva beta vhezheni shanu yeApple Watch inoshanda sisitimu inoita senge inowedzera shanduko huru ichienzaniswa neshanduro yazvino. Mukutaura, watchOS 3.1.1 inowedzera kugadzirisa mukugadzikana kwesystem uye kugadzirisa zvimwe zvikanganiso zveiyo yapfuura vhezheni. Zvakare, mune ino kesi, beta vhezheni dzakaburitswa yeApple zvishandiso dzinowanikwa kune avo vashandisi vari muApple yeruzhinji beta chirongwa, chimwe chinhu icho chero mushandisi ane Apple ID anogona kuita.
Munyaya ye watchOS beta shanduro dzinoda iOS 10 vhezheni pa iPhone kukwanisa kurodha pasi nekuriisa. Ichokwadi ndechekuti isu hatikwanisi kukurudzira iyo fomu nenzira yeibhetas, asi munhu wese anogona kuita zvavanoda nemidziyo yavo. Uye zvakare, iyo incursion yeruzhinji beta vhezheni yevashandisi vasina account yekuvandudza inowanzo gadzikana, izvo hazvireve kuti ivo vakakwana.
Shanduro nyowani dzakaburitswa masikati ano dzakafanana nezviitiko zvakapfuura ishoma maererano neruzivo nezve nhau dzebeta pachayo, ivo vanongotsanangurira kwatiri kuti shanduko kana kusimudzira zvinowedzerwa mukushanda kwesystem uye zvakajairika bug fixes. Sezvakaita mamwe mavhezheni, kana paine chero akakosha kana anoshamisa nhau mushanduro dzakaburitswa, tichazviburitsa muchinyorwa chimwe chete ichi, asi zvinoita sekunge pane zvishoma zvitsva mavari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo yechishanu beta yeWOSOS 3.1.1 inowanikwawo
ICloud Mifananidzo beta yakagadziridzwa kutsigira iyo Kubata Bar uye zvimwe ...
Iyo yechishanu beta ye macOS Sierra 10.12.2 yatove mumaoko evanogadzira